Boliiska Sweden iyo diyaargarowgooda weerarada argagaxisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boliiska Sweden iyo diyaargarowgooda weerarada argagaxisada
La daabacay måndag 16 november 2015 kl 15.07
Ciidamada amniga Sweden diyaargarow bay ugu jiraan weeraro argagaxiso oo halkan ka dhaca, laakiin suurtagal ma ahan in boqolkiiba boqol loo diyaargaroobo weerar argagaxiso, sida waxaa yeri Stefan Singman oo boliiska Stockholm u qaabilsan dhacdooyinka qaaska ah.
– Macquul ma ahan in loo diyaar garoobo maareynta dhacdo weyn oo la mid ah tii Paris ka dhacday, ciidan intas la’eg Stockholm ma joogo iyo guud ahaan waddanka oo dhan, ayuu yeri Stefan Singman oo boliiska Stockholm u qaabilsan dhacdooyinka qaaska ah.
Sannooyin badan ayaa ciidamada amaanka Sweden u diyaar garoobayeen oo tababaro u qaadanyeen sidii ay maareyn lahaayeen weerar argagaxiso, waaxana jira istaraajiyed qaran oo lagu maareyn karo haddii weerar argagaxiso oo ugu dhigma kii jimacahii ka dhacday Paris waddanka la soo gudboonaato.
Goobta la weeraray waan in la sugaa amnigeeda, lana sugaa shaqaalaha caafimaad iyo gurmadka degdega ah, shayga la tuhmayana meesha laga dheereeyo.
– Sida waayo arganimada nabareyso dhacdo weerar ee Paris waa suurtgal in ay dhawaan oo goob noo dhow ka dhacdo. Sidaas daraadeed diyaargarow ugu jirnaa sidii aan u maareyn laheyn , ayuu yeri.
Laakiin sida uu yeri suurtogal ma ahan in heegan buuxa maalin kasta weerar noocaan ah loogu jiro sababtoo ah waxay markas ka micno noqoneysaa in boqolaal ciidamada ah la howl-geliyo oo hegan ku jiraan 24 saac.
– Macquul ma ahan in 24 saac ciidan heegan ku jiraan si ay maareeyaan dhacdo sidaan u weyn. Dhacdadii Paris waxay aheyd mid baaxad leh oo ballaaran oo dhinacyo badan. cid boqolkiiba boqol u ii diyaagaroobi kartaa weerar nocas ah ma jirto, Stefan Singman.
Sidoo kale Sfetan Hecktor oo asna ah iskuduwaha howl-galka ciidamada boliiksa heer qaran in arrinka uusan salka ku heynin tabar iyo awood midna balse ay tahay mid salka ku haaya in la sii ogaado goorta iyo halka weerar argagaxiso dhacayo, sidaas daraadeedna aysan suurtogal aheyn in boqolkiiba boqol loo sii diyaar garaabo.